Tun Tun's Photo Diary: Taungyi #1 (Lunch)
ပန်းခြံထဲမှာ အ၇င်ဆုံးတွေ.၇တာကတော့ ကစားကွင်းပါ။ အကြွေစေ့ တွေ ထည့်ပြီး ကစားရတဲ့ အဆင့်မြင့် ကစားကွင်းပေါ့။ ၀ါသနာမပါတာ နဲ. ခဏပဲ ၀င်ကြည့်ပြီး ပြန်ထွက်လာတယ်။
ဂိမ်းဆော့တဲ့ နေ၇ာက နေဆက်သွားရင် တိ၇စ္ဆာန်ရုံ အသေးစားလို.ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ၀က်ဝံ၊သမင်၊ မျောက်၊ စွန် တွေ ကို ခြံ ခတ်ပြီး ထည့်ထားတဲ့ နေရာ ကိုေ၇ာက်သွားတယ်။ အကောင်တွေက တော်တော် အစာငတ်နေတယ်ထင်တယ်။ လူတွေ ဖြတ်သွားရင် အစာတောင်းနေတဲ့ မျက်နှာလေးတွေနဲ. ကြည့်နေတယ်။ သူတို.လေးတွေကို စနစ်တကျကော ကျွေးမွေးရဲ.လားမသိဘူး။ ကျွေးစ၇ာ ဘာမုန်.မှ မပါလို. လမ်းမှာ တွေ.တဲ့ သစ်၇ွက်တွေ ခူးပြီး အဲ့ဒီ မျောက်တွေ သမင်တွေ ကို ကျွေးခဲ့သေးတယ်။
၀က်ဝံတစ်ကောင်းတည်း သနားဖို.ကောင်းတယ်။ အမှန်က ၀က်ဝံလိုအကောင်မျိုးက အစားအရမ်းကြီးတာ။ ဒီမှာ အစာ ၀၀ မှ စားရပါ့မလား။ ဒီလိုမြင်ရတော့ စိတ်မကောင်းစ၇ာပဲ။
ဒီမျောက်တွေဆို၇င် အပြင်ကို လက်ထုတ်ပြီး အစာ တောင်းနေတာ။ အောက်က ပုံမှာ တွေ.တဲ့ အတိုင်းပဲ။
တိ၇စ္ဆာန်ရုံ ကို ဖြတ်ပြီးဆက်လျှောက်သွားတော့ ပန်းခြံ လို နေရာမျိုးေ၇ာက်တယ်။ ကို၇င်လေးတွေ လှည်းပေါ်မှာ ဆော့နေကြတယ်။ အတွဲ တွေလဲ တွေ.တယ်။း)
နောက်ဆုံးမှာတော့ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ တွေ.ဖူးတဲ့ တောင်ကြီးမြို.ရဲ. ကြိုးတံတားကိုေ၇ာက်ပါပြီ။ တံတားပေါ်မှာ ဓါတ်ပုံဆ၇ာနဲ. မော်ဒယ်က နေရာယူထားပါတယ်။း) သူ.တို. ကိုချောင်း၇ိုက်နေတာ သိသွားပုံရတယ်။ ခဏလေးနေပြီး အဲ့နေ၇ာ ကနေထွက်သွားတယ်။ သူတို.ကို စကားစမြည် မေးကြည့်လိုက်သေးတယ် တံတားဟိုဘက်မှာ ဘာရှိလဲလို. ။ သူတို.ကလဲ ပြန်ဖြေတယ်။ ဘာ ဘာသာစကားနဲ.ပြောလဲ မသိဘူး။ တလုံးမှ နားမလည်ဘူး။ :O
ဗိုက်ဆာတာနဲ. တံတားဟိုဘက်ကိုတောင် ဆက်မလျှောက်ခဲ့ပါဘူး။ ဒီဘက်ကနေပဲ လှည့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ တံတားပေါ် ကနေ အောက်က လမ်းမကြီးနဲ. ဟိုအဝေးက မြေပြန်.ရူခင်းက အရမ်းကို လှပါတယ်။
ကားဆ၇ာကို တောင်ကြီးမြို.က စားလို.ကောင်းတဲ့ ရှမ်းထမင်းဆိုင် ကိုပို.ပေးပါဆိုလို. သူက မောခမ်းကို ပို.ပေးတယ်။ နေ.လည်စာ အချိန်ကျော်သွားလို.ထင်တယ်။ စားတဲ့ သူက ကျွန်တော်တို. အဖွဲ.ပဲ ရှိတယ်။ ပုံထဲက ဟင်းတွေ ကို မှာစားခဲ့တယ်။ အပြစ်ပြောစ၇ာ မ၇ှိအောင်ကို စားလို. အ၇မ်းကောင်းပါတယ်။
ထမင်းစားပြီးတော့ အ၇င်ဆုံး ကနေ.ည အိပ်ဖို.အတွက် အဆင်ပြေအောင် အ၇င်ဆုံး ဟိုတယ်ကို သွားတယ်။ ရွေငါးဟိုတယ် မဆိုးဘူးလို. ညွန်းထားလို. အဲ့ဒီကိုပဲ တန်းသွားလိုက်တယ်။ ၄ယောက်ခန်း (မိသားစုခန်း) ကို ၁ည ၁သောင်းကျော်ပဲ ပေးရတယ်။ အခန်းကေ၇ချိုးခန်းအိမ်သာ ပါပြီး တော်တော်လေး ကျယ်ပါတယ်။
ဒီပုံတွေက ကားပေါ်ကနေ၇ိုက်ထားတာဆိုတော့ သိပ်တော့မကောင်းဘူး။ အဝေးေ၇ာက် တောင်ကြီး သူ/သား တွေ အလွမ်းပြေ ကြည့်လို.၇အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟိုတယ်မှာ အထုတ်အပိုးတွေ ထားပြီး ထန်းဆန်းလှိုဏ်ဂူ ကို ဆက်သွားခဲ့တယ်။ အမှန်က ထန်ဆမ်းလှိုဏ်ဂူ ဆိုတာ တောင်ကြီး က နေ ၂နာရီလောက် ကားမောင်းသွား၇တာ။ တော်တော်လေးဝေးပါတယ်။ ကားဆ၇ာက ၁နာ၇ီလောက်ပဲကြာတယ်ဆိုလို. သွားလိုက်တာ။ လမ်းမှာ မိုးကလဲ ရွာတော့ ခရီးသိပ်မပေါက်ဘူး။ ထန်ဆမ်းက အပြန် တောင်ကြီး ပြန်ဝင်တော့ ည ၇နာရီလောက်ရှိနေပြီ။ Taxi ဆ၇ာကို ညောင်ေ၇ွကနေ ပင်းထယ နဲ. ထန်ဆမ်း ပို.ပေးဖို. ငှားထားတော့ သူက လဲ နေ၇ာ ၂ခုလုံး ကို တ၇က်တည်းနဲ.ေ၇ာက်အောင် ပို.ပေးပါတယ်။ တကယ်တမ်း ကျတော့ ပင်းတယ နဲ. ထမ်ဆန်းဆိုတာက တောင်နဲ.မြောက် ဘာမှ မဆိုင် အဝေးကြီးပါ။ စောစော က သိရင် ပင်းတယပဲ သွားဖြစ်မှာ ထမ်းဆန်းကို တ၇က်တည်း ဆက်သွားဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘုမသိ ဘမသိပဲ နဲ.ေ၇ာက်သွားတော့ လဲ ပြီးသွားတာပေါ့။း)
တနေကုန်လည်ထားတော့ လူက တော်တော်ကို ပင်ပန်းနေပြီ။ ကားဆ၇ာက ဘယ်မှာနေလဲ ဆိုတော့ေ၇ွညောင်ကပါတဲ့။ အင်း သူက ကျွန်တော်တို.ကို တောင်ကြီးမှာ ချပြီး၇င်ေ၇ွညောင်ထိကို ၄၅မိနစ်လောက် ထပ်ပြီး မောင်း၇ဦးမှာပါလား။ သူလဲ တော်တော်ပင်ပန်းသွားမှာပဲ။
ထန်ဆမ်း အကြောင်းတော့ မနေနိုင်လို. အရင်တုန်းကေ၇းပြီး ပါပြီ။ နောက်ပို.စ် မှာလဲ ထန်ဆမ်းကို ကျော်ပြီး တောင်ကြီး မြို.အကြောင်းပဲ ပေးပါမယ်။
at 2/26/2014 06:09:00 AM
ကိုရင်လေးတွေအပေါ်က ပုံနဲ့ ကြိုးတံတားအောက်ကပုံတွေ အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာ... မြေပြန့်၊တောင်တန်းနဲ့တိမ်တွေကို ငေးကြည့်ရတာကိုက လွမ်းစရာလိုလို...။ ကျန်တဲ့ပုံတွေလည်းကောင်းတယ်...။ မောခမ်းကတော့ အမြဲစားနေကျ..ဆိုင်ကိုဖုန်းဆက်ကြိုမှာထားလည်းရတယ်..။ ပုံတွေကြည့်ပြီးလွမ်းသွားပြီ... ကျွန်တော့်အိမ်က မြင်းရုပ်နားမှာဘဲ...။ ပင်းတယနဲ့ထန်ဆမ့် တောင်နဲ့မြောက်ဆိုတော့ အချိန်လည်းကုန် လူလည်းပင်ပန်းသွားမှာပဲ...။ နောက်တင်မည့်ပုံတွေကို စောင့်နေမယ်ဗျာ..။